Problem of Jesus 18 years - Zomi Adventist Innkuan
ယေရှုခရစ်၏ ၁၈နှစ် ပြဿနာ
fri တစယာက် က မေး လာ လို့ ဆရာ ဆိုး ရဲ့၁၈နှစ် ပြသ နာ ဖြေ ရှင်း ချက် လေး ကို ယုံကြည် သုူ များ အ မြင် ရှင်းဖို့အ တွက် တင် ပေး လိုက် ပါ တယ်
ယေရှုခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်ကို ဖတ် ရှုလေ့လာကြ သောအခါ … ဆိုး (ညစဉ်ခွန်အား)
သက်တော် (၁၂) နှစ် မှ အနှစ် (၃၀) အတွင်း ကြားကာလ (၁၈) နှစ်တွင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘယ်မှာရှိနေသနည်း။ ထိုကာလ ယေရှုခရစ်တော်၏ ဘဝတစိတ်တပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍
ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာ ဓမ္မဟောင်းကို အခြေပြုထားတာမို့ အလွန်ရှေးကျတဲ့ ဘာသာလို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။ သို့သော်လည်း တကယ့် တကယ်တော့ ခရစ်တော်သာလျှင် ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကို စတင်တည်ထောင ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းကာလဟာ ဂျူးဘာသာ ကာလလို့ ပြောရင် မမှားလောက်ပါဘူး၊ လောကကြီးစတင်ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရပြီး ပထမလူသား အာဒံမှ ခရစ်တော်မပေါ်ပေါက်မှီကာလတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း အယူအဆကို ဂျူးဘာသာ၊ အစ္စလန်ဘာသာ နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့က လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
အေဒီ ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယေရှုခရစ်တော်က မိမိဟာ ထာဝရဘုရားသခင် က စေလွှတ်လိုက်တဲ့ ကယ်တင် ရှင်ဖြစ်တဲ့အ ကြောင်း ဟောပြော ကြေငြာခဲ့ပေမဲ့ ဂျူးလူမျိုး အများစုက မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ပြီး မိမိတို့ ပရောဖက်ဟောခဲ့တဲ့ ကယ်တင် ရှင် ကို ဆက်လက်မျှော်လင့်နေတာမို့ ဂျူးဘာသာဟာ သီးသန့်ကျန် ရစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာ သီးခြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်ကြောင့်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ကျမ်းစာကတော့ ဂျူးတွေရဲ့ ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို မိမိတို့ရဲ့ ကျမ်းရင်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး ခရစ်တော်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက် ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးထားတဲ့ကျမ်းများကိုတော့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းလို့ သတ်မှတ်အသုံပြုခဲ့ပါတယ်။
ကိုးကွယ ်ရာ ဘာသာတရားတို့တွင် အခြေခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှိစမြဲပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကြီးများစွာအနက် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံပုဂ္ဂိုလ် ဗုဒ္ဓလောင်းလျာ သိဒ္ဓိတ္တမင်းသားကို BC567 မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ အခြေခံပုဂ္ဂိုလ် ခရစ်တော်ကို AD2မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စလမ်ဘာသာကို ဖေါ်ထုတ်သူ မုဟမ္မာဒ်ကိုတော့ AD 571 မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာာကို ဖေါ်ထုတ်သူ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ဇာတိဇစ်မြစ်ကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ရောမများအုပ်စိုးရာ ပါလက်စတိုင်းဒေသကို ပြန်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘီစီ ၆၃ မှာ ဂျေရုဆလင်မြို့ဟာ ရောမတို့ လက်အောက်ကို ကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ Augustus Caesar ဟာ ဘီစီ ၂၇ မှာ ရောမအင်ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ်ဘုရင ်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ယာကုပ်ရဲ့ သားအကြီးဆုံးဖြစ်သူ ဧသောအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဟေရုပ် Herod ဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့ ဘုရင် ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဟေရုဒ်ဟာ အာဗြာဟံက ဆင်းသက်လာတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒါဝိဒ်အနွယ်က တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး၊ တစ်ခါ ဒါဝိဒ်ရဲ့ သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရှောလမုန် နှင့် နာသန်တို့ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ အနွယ်ထဲက ယောသပ် နဲ့ မာရိကို ထိမ်းမြားဖို့ စေ့စပ်နေကြတယ်။ နာသန်က နေပြီး ဆင်းသက်လာတဲ့ လူမျိုးဆက် (၄၀)မှာ မာရိကို ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။
ယောသပ်နဲ့ မာရိ နှစ်ဦးစလုံးကို ဗက်သလီဟင်မြို့မှာ ဖွားမြင် ခဲ့ပါတယ်။ စေ့စပ်ချိန်မှာ နာဇရက်မှာ သူတို့ရှိနေကြပြီ။ ယောသပ် ရဲ့ အသက်မွေးလမ်းကြောင်းကတော့ လက်သမားအလုပ်၊ ခရစ်တော်ရဲ့ ဘဝအစမှာပဲ ပြဿနာတစ်ခု တွေ့ရပါတယ်။ မာရိဟာ အပျိုစင်ကလေးတစ်ယောက်၊ ယောသပ်နဲ့လည်း မရင်းနှီးရပဲနဲ့ ကိုယ်ဝန် ်ရှိလာတယ်။ ထာဝရဘုရား၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်။ မမွေးရသေးသောသားကိုလည်း ယေရှုဟု အမည်မည့်ရပြန်သတဲ့။
မဖြစ်နိုင ်ဘူးဟု တွေးစရာဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းဆရာ၊ ဘာသာရေးဆရာတို့ အပြင်းအထန် အငြင်းသန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ သို့သော် တကယ်ပင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အပျိုစင ်ဘဝနှင့် ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ကာ အပျိုးစင် ဘဝနှင့်ပင် ယေရှုကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ယေရှုကို မာရိမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ယေရှုကိုမွေးဖွားပြီးသည့်တိုင်အောင် မယ်တော်မာရိဟာ အပျိုစင ်ပဲ ရှိနေေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဘဝရဲ့ အစအဦးမှာ ယောသပ်နဲ့ မာရိရဲ့ သားဟုတ်မဟုတ် ပြဿနာအပိုင်းအစကို တွေ့ရပါတယ်။ ယုံကြည်ဖို့ရန် ခက်ခဲပြီး အချို့သောခရစ်ယာန်ဘာသာ ဆန့်ကျင် သူ Anti-christ များက ထောက်ပြ ဝေဖန်စရာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ပိုပြီးဆိုးဝါးစွာ ပြောဆိုရေးသာရင်း မယ်တော်မာရိကို စော်ကားသလိုဖြစ်လာပါသေးတယ်။ စာပေလက်တံရှည်များနဲ့ သိမ်းရိုက်တဲ့အခါ ယုံကြည်သူအချို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇဝါဖြစ် ရပါသေးတယ်။
ကိုယ်ဝန်အငှားလွယ်တဲ့အခါ မိန်မသားဟာ လင်ယောင်္ကျာတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးဖို့မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအသွေးအသားလည်း ပါဝင် ဖို့မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ်ကို ခေတ္တပေးထားရတာပဲ၊ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံမှုကင်းတဲ့ မိန်းကလေးဟာ အပျိုစင်ပဲမဟုတ်လားဗျာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သံဝါသမပြုပဲ ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်အငှားလွယ်တဲ့ကိစ္စ (တနည်းအားဖြင့် သားအိမ်အငှားလွယ်ခြင်းကိစ္စကို စပြီးကျင့်သုံးသကတော့ ထာဝရဘုရားသခင်ပဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။Testube Baby တွေထဲမှာ သားဦးဟာ ယေရှုခရစ်တော်လို့ ပြောကြည့်ကြရအောင် …။
၁၂ နှစ်သားကာလအထိ ….
ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝကို ခရစ်ဝင် ကျမ်းတွေမှာ ပြည့်ပြည်စုံစုံဖတ် ်ရတဲ့အခါမှာလည်း အင်မတန်မှ လှုပ်လှုပ် ရှားရှားနိုင် ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စဉ်ကတည်းက ပဟေဋိဆန်ခဲ့တဲ့ ဘဝတခုဟာ မိဘများ ခရီးသွားရင်း မွေးဖွားခြင်းခံရပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင် တမြေရပ်ခြားကို သွားပြီး ပုန်းရသေး၊ အသက်ဘေးကလည်း သိုးကာသီကာ လွတ ်ရုံကလေး ပြေးရလွှားရ၊ သက်တော် ၁၂နျစ်မှာ တကယ့်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ နင် လားငါလား တရားစကားဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။
သက်တော်စဉ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တဖန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါ သက်တော် ၃၀ အရွယ် ရှိနေပါပြီ၊ ဒီကြားထဲမှာ ၁၈ နှစ်တိုင် တိုင် ဆိတ်ငြိမ်သောနှစ်ကာလ Silent Years ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ …
ယေရှုသည်လည်း အစဉ်အတိုင်းကြီး၍ ပညာတိုးပွားလျက် ဘုရားသခင်ရှေ့၊ လူရှေ့မှာ မျက်နှာ ရ တော်မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် …
“This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only inageneral way that he ledanormal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household .. ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
ဝင်းမော်ဦးစာပေမှထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသော စာအုပ်တစ်အုပ်၌မူ အိန္နိယနိုင် ငံ၊ ဘုံဘေမြို့ အယ်လိဖင့်စတုန်းကောလိပ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး J Wilson MA Oxford University ၏ အမေးနှင့်အဖြေကဏ္ဍတွင် သက်တော်စဉ်၏ အပိုင်းအစ တချို့ကို မှားယွင်းကောက်ချက်ချထားသည်ကိုတွေ့ရသည်၊ ၁၈ နှစ်ကာလအတွင်း ယေရှုခရစ်တော်သည် တိဘက်ပြည်ကိုသွား၍ … ဆိုသော အကြောင်းအရာများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင် စု ချီကာကိုမြို့ ကမ္ဘာကျော်ခရီးလည့်လည်သူ သုတေသနပုဂ္ဂိုလ် ဂိုးရစ်ခ် ရဲ့ မှတ်တမ်းအရ .. ဟု ကိုးကားဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဂိုးရစ်ခ်၏ မှတ်တမ်းဆိုသော်လည်း စာအုပ်ထုတ်ဝေမှု ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း မှီငြမ်းပြုသည့် အချက်အလက်မပါပဲ နှုတ်စကားမှီြင်းသဖြင့် ပညာရှင ်မဆန်ပါ၊ ယုံကြည်လောက်ဖွယ် ရာ အထောက်အထား အားနည်းခဲ့ပါတယ်။
အဲသလို စာရေးသားထုတ်ဝေမှုတွေနဲ့အတူ ဟောပြောသွန်သင ်မှုတွေကြောင့် ခရစ်တော်ရဲ့ သက်တော်စဉ်ဟာ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးနောက်ကျိ လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါ ရောမလူမျိုး ဘုရင် ခံ ပွန်တီယပ်စ် ပစ်လေးရဲ့ စာတမ်းဆိုပြီး ကိုးကားမှုလုပ်ပြီး ရေးသားထုတ်ဝေမှုတွေကြောင့် ခရစ်တော်ရဲ့ Silent Year ဟာ ပဟေဋိဆန်လာပါတယ်။ The Unknown Life of Christ ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက်နဲ့ ယုံကြည်မှုရေးရာမှာ အတော်ကလေး ကသောင်းကနင်းနိုင ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကလောင် ကို ပွဲဆူဖို့ သက်သက်အသုံးပြုတဲ့အခါ အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ ကြောင်းကျိုးမခိုင် လုံပဲ ရေးသားချက်တွေကြောင့် အပေါ်ယံရှပ်ကြည့်ရင်တော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်ပါပဲ။
ဒီမှာ သက်တော်စဉ် ဖော်ပြခြင်းရဲ့ အားနည်းမှုတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှင ်လုကာဟာ ခရစ်ဝင် ်ကျမ်းရေးသူတွေထဲမှာ ပညာအတတ်ဆုံး၊ အသေးစိတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးချက်တွေ သိပ်ကောင်းတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခန်းကြီး ၂ နဲ့ ၃ အကြားမှာတော့ (၁၈)နှစ် ကာလကို တိတိကျကျဖြက်တောက်ထားပါတယ်။
ရှင် လုကာ St. Luke ဟာ ဒီခရစ်ဝင် ်ကျမ်းကို အကြားနဲ့တင်ရေးတာမဟုတ်ဘူး၊ The Great Physician ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ လုကာန ရဲ့ အကြောင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ သုတေသနပြုခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ လုကာန ဟာ မယ်တော်မာရိကို တွေ့ဆုံပြီး (ဗျူး) ပြီးမှ ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ရေးကြောင်း၊ တွေ့ဆုံတဲ့နေရာ၊ မေးခွန်းတချို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့သတဲ့၊ လုကာန ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ Silent Year ကို မမေးပဲ မ နေပါဘူး၊ မာရိကလည်း မ ပြောပဲ မနေပါဘူး၊ သို့သော် ဘာဖြစ်လို့ ဒီအကြောင်းအရာကို ခရစ်ဝင် ကျမ်းထဲ ထည့်မ ရေးခဲ့တာလဲ၊ ရေးရဲ့သားနဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကို သိင်္ဂါယနာတင် ်သူတွေက အက်ဒစ် Edit ဆန်ဆန် တည်းဖြက်လိုက်တာလား။ မဟုတ်ဘူး။ လုကာကိုက မ ရေးခဲ့တာ လား။
သူမ ရေးခဲ့တာပြဿနာမဟုတ်ဘူး၊ (၁၈)နှစ်ကာလကို ဝါကျတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ သူက ပိုင်းဖြက်သွားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ဆန့်ကျင် သူတွေက ဒီနေရာကို အားစမ်းပြီး ဖြိုဖို့ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာတယ်။ စာအုပ်စာပေ တွေ ရေးသားထုတ်ေ၀ တိုက်ခိုက်လာတယ်။ ဒါကို ဖတ်မိတဲ့ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရင် ထဲမှာ ခံစာကြရတယ်။ ကျွန်တော် အယ်ဒီတာလုပ်နေတဲ့ဆီကို စာအချို့ရောက်လာတယ်။ ဒီပြဿနာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ မေးမြန်းကြတယ်။ ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကိုယ်လုပ်နိုင် သ လောက်ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာက ရှိနေပြန်တယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင ်လည်း ဒီစာအုပ်များကို ဖတ်မိပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်း နုနယ်သူအတွက်တော့ လဲပြိုလောက်ပါတယ်။ အောက်ပါဥပမာကလေးများကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
မေး။ ။ ဒါဖြင့် အသက် (၁၂)နှစ်က အသက်(၃၀)အထိ (၁၈)နှစ်လုံးလုံး ခရစ်တော်ဟာ ဘယ်သွားနေပါသလဲ။
မေး။ ။ အဖိုတန် (၁၈)နှစ် လုံးလုံး ခရစ်တော်ဘာများလုပ်နပါသလဲ။
တိဗက်ကို သွားမသွား ….
R.W.F Wootoon ကတော့ သူ့ရဲ့ Christian Worship စာအုပ်မှာ “But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)” လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ အေဒီ-၃၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင ်မှာ ခရီးလမ်းပန်းဟာ ခက်ခဲလှပါတယ်။ တိဗက်နဲ့ ပါလက်စတိုင်းဟာ မိုင်ပေါင်း ၄၀၀၀ မက ကွာဝေးမယ်။ ခြေကျင် ခရီးကို (ဂိုးရစ်ခ်ရဲ့ အဆိုအရ လေးလကြာ ခရီးနှင်ပြီး) သွားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင် စရာမရှိပါဘူး။ သူဘာအတွက် သွားသလဲဆိုတာကလည်း ရှိသေးတယ်။ ဘာသာတရားတစ်ခုကို သွားရောက်ဆည်းပူးတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂိုးရစ်ခ်ရဲ့ ပြဿနာကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ဘာသာတရားဟာ တိဗက်ကို မ ရောက်သေးဘူးဆိုတာ မသိတဲ့ပြဿနာပဲ။ သမိုင်းကျမ်းအဆူဆူအရ ယေရှုခရစ်တော် သွားရောက်လေ့လာတဲ့ ဘာသာတရားဟာ တိဗက်ကို (A.D 645-650) လောက်မှ ရောက်တာပါ။ ယေရှုခရစ်တော်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ A.D (14-32) ကတော့ အဲဒီမှာ ဒီဘာသာတရားကို မပြန့်ပွားသေးတာပါပဲ။ ရိုးရိုးစဉ်းစားရင ်ကို အ ဖြေ ပေါ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားကို မသင်ကြား မလေ့လာခဲ့ပါဘူး။
မဿဲ ၂း၂၃ မှာ ခရစ်တော်ကို နာဇရက်လူဟု ခေါ်ကြလတ္တံဟူသော ပရောဖက်တို့၏ နှုတ်ထွက်နှင့်အညီ နာဇရက်အမည ်ရှိသော မြို့သို့ ရောက်၍ အမြဲနေလေ၏။
လု ၄း၁၆ တွင ်မူ ကြီးပွားတော်မူရာ နာဇရက်မြို့သို့ ရောက်တော်မူလျှင် ….
စသည့် ခရစ်ဝင ်ကျမ်းပါ စကားများသည် ခရစ်တော် အဘယ်မှမသွားကြောင်းကို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ Rev.. သိမ်းအုပ်ဆရာကမူ ခရစ်တော် သွားခဲ့ရင် မှတ်တမ်းရှိရမယ်၊ အနည်းဆုံး ဂျူးသမိုင်းမှာ ပါကိုပါရမယ် ဟု ဆိုပါတယ်။
နာဇရက်မြို့မှာ (၁၈) နှစ်တိုင် တိုင် နေထိုင ်ခဲ့သော ခရစ်တော် ဘာလုပ်နေသနည်း။ ဤမေးခွန်းမှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။ Rev .သိမ်းအုပ် ၏ (၁၈)နှစ် ပြဿနာစာစောင်ကလေးတွင ်မူ (၁၈)နှစ်ကာလ သူဘာလုပ်နေသည်ကို ဓ လေ့ထုံးတမ်းအမြင် Customary View မှ တင်ပြ Point out လုပ်ပါတယ်။ မာကု ၆း၃ မှာ သူသည် လက်သမားသားမဟုတ်လော၊ မာရိ၏သားမဟုတ်လော။ ယာကုပ်၊ ယောသေ၊ ရှိမုန် … တို့၏ အစ်ကိုမဟုတ်လော ဟု ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အချက်များမှ ..
ယေရှုသည် လက်သမားသားဖြစ်သည်။ ယုဒထုံးစံ၌ သားသမီးတို့တွင် အကြီးဆုံးသောသားသည် မိမိဝါသနာပါရ ကြိုက်နှစ်သက် ရာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရွေးချယ်၍မပြုရ၊ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဝါသနာပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ၊ ဖခင်၏ လုပ်ငန်းကို ဝိုင်းကူလုပ်ကိုင် သက်မွေးရသည်။ ကျန်သားသမီးများက မိမိစိတ်ကြိုက် နှစ်သက် ရာ၊ဝါသနာပါရာတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင် ်ခွင့်ရကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အသက်(၃၀)နှစ်မပြည့်မချင်း ဘာသာရေးဝင်ရောက် ဦးစီးခေါင်းဆောင် ်ပါဝင် လှုပ် ရှားခွင့်ပြုရိုးထုံးစံမရှိ၊ သဘာဝလည်းကျပါသည်။ အသက်(၃၀)ရှိမှ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်မှု၊ ဗဟုသုတစုံလင ်မှုရှိပြီဖြစ်၍ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းကို ဝင်ရောက်လုပ်ခွင်ပေးမြဲဖြစ်သည်ကို လည်းကောင်း….
ကောက်နုတ်၍ (၁၈)နှစ်ကာလသည် ခရစ်တော် နာဇရက်မြို့မှာပဲ လက်သမားလုပ်နေကြောင်း သက်သေထူခဲ့ပါတယ်။ H.E Dana က ယေရှုခရစ်တော်၏ ဖခင် ယောသပ်သည် ငယ ်ရွယ်စဉ် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသဖြင့် မိခင်၊မုဆိုးမနှင့် ညီ၊ညီမငယ်တို့အား (၁၈)နှစ်တိတိ လုပ်ကိုင် ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသည်မှာ ယုတ္တိတန်လေသည်။
အကယ်၍ထိုအချိန်တွင် တိဗက်သို့ ယေရှုခရစ်တော်ရောက်နေပါက မုဆိုးမမိခင် အိုနှင့် ညီ၊ညီမငယ်များစွာတို့ ဘယ်လိုများ ဝအောင ်စား၍၊ လှအောင်နေပါ့မလဲ၊ မိမိ မိသားစုအတွက် အလျင်ငြိမ်းအေးအောင် ဆောင် ရွက်ခဲ့သည်ကို မယုံနိုင ်စရာမရှိပါ။
တကယ်တော့ ခရစ်တော် တိဗက်ကို မသွားပါဘူးဆိုတာနဲ့ ပြီးပြတ်ပါပြီ၊ သို့သော် စာရွက်ပေါင်း ၁၀၀ ပေါ်မှာ (၁၈)နှစ်အတွင်း အတွေ့အကြုံကို သက်သေခံထားတယ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်၊ ဟေဗြဲဘာသာနဲ့ ရေးတဲ့မှတ်စု၊ ၁၉၂၅ခုနှစ်မှာ ဂိုးရစ်ခ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ စာအုပ်ကိုတော့ ကျွန်တော်မမြင် ဖူးပါဘူး၊ ရှိတယ်ဆိုတာပဲ ကြားဖူးတာပါ။ သို့သော် ဒီအကြောင်းဟာ မမှန်နိုင ်ဘူးခင ်ဗျ။ အဲဒီအချိန်မှာ စာရွက်မှ မပေါ်သေးပဲကိုး၊ စာရွက်၁၀၀ကို (AD-30) လောက်မှာ ဘယ်ကိုသွားရှာမလဲ။ ကျွန်တော့်မှာ သမီးတစ်ယောက် ရှိတယ်။ စာကျက်တဲ့အခါ အလွန်အော်ကျက်တတ်တယ်။ တစ်နေ့မှာ သူကျက်တဲ့ဆယ်တန်းစာတစ်ပိုဒ်မှာ
“Paper was invented in China at the begining of the second century A.D” တဲ့၊ တကယ်တော့ ဂိုးရစ်ခ်ဟာ ပါမောက္ခတစ်ဦးလို့ ဆိုတယ်။ ဘယ်လိုပါမေက္ခမျိုးလဲတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိတာအမှန်ပါပဲ …
တစ်ခါတစ်ခါလည်း ဒီပြဿနာတွေက အသံကျယ်လာတတ်ပါတယ်။ သို့သော် အဆံမပါပါဘူး၊ သေသေချာချာ ပိုင်းခြားစီစစ်ရင် ပြီးပျောက်သွားတာပါပဲ။ မှားနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ အများကြီးမှ အများကြီးပါ။ သို့သော် ဒါတွေဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေညှိတက်အောင် ကြိုးစားချက်ကလေးများပဲ ..လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ထစ်ချုန်းတဲ့ မိုးကြိုးသံက လေးများပါပဲ။
အဖြစ်အပျက်အမှန်က တော့ သမ္မာကျမ်းထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။ သေသေချာချာစေ့စေ့ငှငှ ဖတ် ရှုရင် ပြီးပြည့်စုံအောင် သိနိုင် မှာပါ။ သမ္မာကျမ်းစာဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကိုပဲ ယုံကြည် ်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ မပိုစွန်းသလို၊ တစ်ပုဒ်တစ်လေမှ မလိုလွန်းဘူး ိုတာကိုလည်း စိတ်နှလုံးမှတ်ကျုံးရပါလိမ့်မယ်။
ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ (၁၈)နှစ်ကာလကို ညိုသောင်းဆိုတဲ့ စာရေးဆရာ (ဘာသာတရားများစွာကို သုတေသနပြုသူ) က .. “ယေရှုသည် ဖခင်ယောသပ်ကဲ့သို့ လက်သမားလုပ်၍ နေထိုင် ခဲ့သည်မှာ အသက်၃၀တိုင်အောင် ကြာညောင်းခဲ့လေသည်” .. ဟုရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကော ဘယ်လိုပြောမလဲ၊
9. ကမ္ဘာကို ချုပ်ကိုင်မည့်သူ (ဌေးလှိုင်)
MURANN မှတ်ချက်။ 2008 တွင်ထုတ်ဝေသော ထစ်ချုန်းသောမိုကြိုးသံ စာအုပ်မှတဆင့်ဖေါ်ပြပါသည်။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းသွယ်(၃)၊ ရွှေပြည်သူမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
မူရင်းတင်သူကို credit ပေးပါတယ်။
Tags: Articles, Biography
Prev post ZSS 2: A HOIHZAW LEITHAK KHAT GEELNA
Next post Global Mission Late ~ VC Mang